IDubai yindawo engcono kakhulu yokusebenza, ungawuthola kanjani umsebenzi
Dubai iyindawo engcono kakhulu yomsebenzi?
IDubai yindawo engcono kakhulu yomsebenzi? Kungani sekwenzekile lokho? Empeleni, IDubai ingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. Akubuzwa lutho, wonke umzingeli we-career ofuna ukubekwa eDubai. Futhi ngaphezulu kwalowo msebenzi e-UAE kuyindlela enhle yamaholo angakhokhelwa intela angcono kakhulu. Kepha ukuthola umsebenzi e-Emirates. Udinga ukuthi ube nendawo a I-Dubai career consulting job search kanye nezindlela zokuthengisa emakethe isiqondiso esigcwele.
IDubai nayo iyindawo ethengisa kakhulu. Baningi osopolitiki, Amalungu omndeni wasebukhosini, kanye nabaninimabhizinisi. Le ndawo enhle kakhulu futhi ihamba phambili idolobha labantu abahlala emazweni angaphandle. Ngakolunye uhlangothi, iDubai City ikhonjwe njengedolobha elikhangayo kakhulu kulabo abafuna imisebenzi emazweni aphesheya. Ngenhloso yempilo ezweni lama-Arabhu, le ndawo ingenye yezindlela ezinhle kakhulu futhi ngokwe impilo yobungcweti kanye neyangasese. Maphakathi nebhizinisi le-Emirates, ungakwenza uthole imisebenzi emangalisayo evela kubaqashi.
Dubai iyindawo engcono kakhulu yokusebenza e-Emirates?
Njengendlela Umfanekiso we-Wellness Emirate. Le ndawo iba yi-5th yamadolobha avelele emhlabeni. Elinye iphuzu elibalulekile ukuthi leli dolobha liba ngokushesha indawo evakashelwa kakhulu ukuze abaphathi abasebenza kahle basebenze. Ukubeka enye indlela esikhundleni se ukuhamba nokuthola umsebenzi ezindaweni ezinzima kakhulu njengeSingapore, iLondon, neParis. Noma kunezindawo ezikalwe phezulu zokuvakasha kanye neNew York, Hong Kong, Doha, Mumbai.
Ku-2018 Dubai simo alunakuphikiswa ku ukukhula komnotho kanye namabhizinisi amasha. Okunye okubaluleke ngokulinganayo ukuheha abantu jikelele. Ngesibonakaliso esifanayo, lokhu Idolobha liyindawo yokuphuza umsebenzi omusha ikhwalithi nemigomo yokuphila kanye nezindleko zokuphila. Ukuze usebenze e-UAE. Inkampani yethu icebisa a I-search engine yomsebenzi e-Dubai futhi iwebhusayithi yokuqasha indawo. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Kungani iDubai iyindawo engcono kakhulu yokusebenza njengomphathi. Ngoba ungathola umsebenzi ngokushesha!.
Amadolobha ase-United Arab Emirates
Okokuqala, izindawo ezihle kakhulu zibeka emadolobheni e-UAE ahlanzekile abaphothule futhi abahambile ezweni elisha ku-2018. Yiqiniso, i-Abu Dhabi iyindawo enhle yokuphatha umsebenzi, e-Dubai, ne-Sharjah nayo iphinde iphakanyiswe phakathi kwemizi engcono kakhulu ukuze iphile kwi-World Trade Arabic.
Ku-2018 naku-2019 ku-survey yamuva Ivumela i-Dubai indawo engcono kakhulu yabaphathi. Futhi ngaphansi kwalezo zimo lapho ufuna ithuba elihle lomsebenzi kubaphathi. Kumele thatha lo muzi njengento enhle kakhulu emhlabeni. Izikhulu ZikaMongameli, kanye Nabaqondisi Abapheki bathola imisebenzi engcono. Kuleso simo amathuba emisebenzi angcono ebanga labaphathi abaphezulu, abaphathi be-C-level bazoba thola impilo engcono futhi amaholo angcono kakhulu futhi ancintisanayo aqhathaniswa nabanye.
Ngaphezu kweminyaka, abafuna umsebenzi omkhulu bafuna imisebenzi ku uwoyela negesi. The abafuna umsebenzi ozofika e-Dubai njengendawo efunwa kakhulu emhlabeni wonke. Kubo ukuthola umsebenzi e-Abu Dhabi noma e-Dubai kuyinto engcono kunazo zonke ezake zikhona emsebenzini wokusebenza.
Ngakolunye uhlangothi cishe cishe abafuna umsebenzi abavela eNdiya ukubuka nsuku zonke amathuba emisebenzi ye-8,000 namafutha negesi. Ngaphezu kwazo zonke izisebenzi zase Dubai kudingeka ziphendule wonke ama-agent wokuqasha. Ngalokhu engqondweni ngibheke njalo isayithi lomsebenzi elisha yokufundisa ulwazi ngemisebenzi mayelana nomsebenzi. Ukuqashwa okungcono kakhulu kwamathenda kufaka ama-agents abaqashi base-Dubai ngaphezulu kohlu lwabo lomsebenzi.
Izindawo zokuvakasha e Dubai
Idolobha elihle kunayo yonke iplanethi ibe i-Dubai e-United Arab Emirates. Indawo enhle yezivakashi ngamaholide nendawo eshisayo yemisebenzi. Bangu izindawo eziningi kakhulu edolobheni. Empeleni, izivakashi ezintsha ziyayithanda le ndawo ngenxa yezindawo eziphakeme ezitolo ezinkulu. Kepha ukuthola umsebenzi eDubai kufanele ube ne-visa yokusebenza. Ngasohlangothini olubi, udinga ukwazi ukuthi ungathola kanjani umsebenzi.
The Umbusi wase-Dubai siguqule sonke isifunda sisuka kuHulumeni omncane saya enhlanganweni enkulu. UDubai uthuthile kusuka endaweni eyihlane ukuya kwelinye lamadolobha amahle kakhulu emhlabeni. Iningi lokuhehayo nendawo okuyiwa kuyo kuletha okuningi nokuningi izivakashi ku-UAE. Akukhona nje kuphela ukuthi ungakwazi ukujula olwandle kepha ungasesha amabhizinisi wokuthengisa.
Konke ezungeze e-Emirates, kuhle ukukhanya kwelanga. Ngesikhathi esifanayo, i-UAE yindawo engcono kakhulu yomndeni. Inhloko-dolobha ye- I-UAE yindawo edumile yezidingo. Abantu bathanda le ndawo ngezindawo ezikhangayo ezifana ne-Burj Khalifa. Futhi lokhu ngokusemthethweni isakhiwo esikhulu kunazo zonke emhlabeni kwi-GCC. Kodwa nakakhulu, izindawo zingase zibalulekile emndenini wakho. Isibonelo udumo lwe-Dubai shopping mall.
I-Dubai yethu enhle ihlala iphelele kunoma ngubani. Ungakhetha okukhangayo okuvela ku- ama-aquarium amakhulu kanye nemithambeka yangaphakathi ski. Ukubeka ngenye indlela, leli dolobha linokuvezwa okuningi kwamasiko izivakashi nabazingeli bemisebenzi. Kunezinto eziningi okumelwe zenzeke kuwo wonke ama-Emirates. Izimoto kule ndawo zihle kakhulu futhi zibe nezengezo zanamuhla.
I-Dubai yindawo engcono kakhulu yomsebenzi, zama ukuthola umsebenzi njenge-Expat.
Imisebenzi eMpumalanga Ephakathi
Uhulumeni wase-Emirates futhi isekela abafuduka e-Dubai ekutholeni umsebenzi. Abafuduki base-Emirates bangathanda ukuthola nokusebenzisa imali yabo yamafutha ngaphakathi kweDaily Dubai nase-Abu Dhabi. Abaphathi bezentente emhlabeni wonke bayamukelwa njalo e-Emirates. Izinkampani eziningi ebudlelwaneni beDairobi neSingapore, eNew York, naseLondon Human Resource Capital Companies.
Izinkampani zokuqasha ubuholi njenge-Adecco, Bayt ne-GulfTalent nabanye abaningi. Ibeka i-UAE ngaphambi kwamanye amazwe ngenhloso yokuqasha kabusha. The Imisebenzi engcono kakhulu emikhakha ehambisana namafutha. Ngenxa yalesi sizathu umnotho emazweni aseGulf naseMpumalanga Ephakathi njengengxenye ye-No.1 yokuheha abaphathi abasha. I-talent engcono kakhulu efuna izinkampani e-UAE. Futhi lapho ungakwazi uthole amathuba emisebenzi emhlabeni jikelele njengowesifazane.
Ngokuvamile ukukhuluma abanye abafuna umsebenzi kungamangaza. Akukhona lokho kuphela IDubai ibalwe njengendawo enhle kakhulu yokusebenza e-UAE. Izichazi ziphinde zilinganise kahle i-Shariya ne-Abu Dhabi. Ukusesha umsebenzi we-Global kuyatholakala futhi lapho ukuhlala ezinkampanini zase-Emirates nase Saudi Arabia.
Ngokuhamba kwesikhathi, abaholi bebhizinisi laseDaily City kanye nabanikazi bezinqumo ezibalulekile ngabantu abakhulu ngokuphathelene nokuphathwa kwabasebenzi. Ngomsebenzi omkhulu, abafunayo bayaqaphela ukushintsha kwezwe. Ama-recruitment agents ahola abathumbi abaningi ukuba bakhethe i-Dubai ne-Abu Dhabi njengendawo yokuhlala, ukusebenza futhi ujabulele ukuphila kwabo ezweni lebhizinisi lase-Arab.
Kungani iDubai iyindawo engcono kakhulu yokusebenza? Ngoba iningi lama-Expats lithola umsebenzi lapho.
Iseluleko sokuthola umsebenzi ku-UAE
Ngaphansi kwalezo zimo abafuna umsebenzi esikhundleni sezindawo ezijwayelekile zomsebenzi. Manje ukhetha amawebhusayithi wokusebenzela akhokhelwayo. Ngoba uma othile esebenza e Dubai iminyaka engaphezulu kwe-10. Kunamathuba amaningi okuthola umsebenzi emakethe yomsebenzi wase-Emirates. Akumangazi ukuthi ngokuqinisekile ukuthola umsebenzi e-UAE njengoba amaPhakistani ayethumela. Ngisho nezithuba zemisebenzi ezifana ne-CEO ne-Management Director (MG). Noma iqembu le-MBC noMongameli we-Insead Alumni Association e-UAE.
Ngomsebenzi omkhulu, abafunayo babamba izinombolo ezinkulu zabasebenzi abaqeqeshiwe. Futhi beza ukusebenza e-UAE unyaka ngamunye. Ngesikhathi esifanayo, abafuna umsebenzi abaningi abavela eNdiya ba ukuhlala isikhathi esiningi kakhulu ema-Emirates. Isasasa lemakethe yobunjiniyela emema abantu abaningi unyaka ngamunye. IDubai City yenza zonke izikhala zitholakale kubaphathi bamazwe omhlaba. Lo muzi omangalisayo wama-Arabhu uhlanganisa inhlanganisela umsebenzi omangalisayo kanye nendlela yokuphila ngokulinganisela kubantu abaningi.
E-Emirates, ukukhuluma nje, kuningi amathuba amahle ku-2020. Imisebenzi eDubai idumile kakhulu futhi yakhe umsebenzi nezinkampani eziningi ku-Resume yakho. Udinga ukuba nayo uqale ngesipiliyoni sekhwalithi ephezulu ngaphakathi kwe-UAE. Izinkampani ezihamba phambili lapha eDubai yizinkampani zomhlaba jikelele. Lapho ukwazi khona sungula ulwazi lomde olude eMpumalanga Ephakathi.
U-Yousuf Almulla oyi-Chief Strategy Officer eDubai Holding, Umuntu ophambili ku Ibhizinisi laseDubai ngubani i-UAE kazwelonke kanye ne-EMBA alumnus. Ukusho njalo ezingxoxweni zabo ngemiphumela yokuphuma kwe-UAE. Umsebenzi we-UAE uzuzisa kakhulu kubaphathi nabaphathi abaholayo. I-UAE ngamazwe alabo abafuna imisebenzi kazwelonke kanye nabazingeli bezikhundla abasebenza kude. Imiphakathi ngaso sonke isikhathi ukukhuphuka ukuthola ukwamukelwa okunjalo.
Imisebenzi e Dubai ayilula ukuthola
Empeleni, i-Dubai City Company inquma ukudla kwasemini amasevisi akhethekile. Ngakolunye uhlangothi, siyikho ukusiza abafuna umsebenzi emasangweni aseGulf njenge-Qatar ne-Saudi Arabia. Kusukela i-2009 silawula izicelo zomsebenzi wokufuna umsebenzi. Ngethemba lokuthi umuntu ofuna umsebenzi ohamba phambili uzothola umsebenzi omusha eQatar noma eSaudi Arabia.
Ngakolunye uhlangothi, i-Dubai City Company iba ngokushesha indawo engcono kakhulu yokusebenza futhi Umhlinzeki womsebenzi we-1 ku-UAE. Ngakho wonke umuntu ofuna umsebenzi angalayisha i-CV yeMisebenzi e-Dubai. Umsebenzi ovamile eMpumalanga Ephakathi kunzima ukuthola. Futhi wonke umuntu uyazi. Kodwa ngecebo lethu lokuphathwa kwezeMphakathi, kuzoba lula ukuthola. Uma u qala ukuzithengisa emakethe yomsebenzi we-UAE ungakwazi ukuthola kalula i-Dubai City.
Ngesikhathi esifanayo, abaningi abafuna umsebenzi balayisha i-CV kuwebhusayithi yethu nge-MBA. Futhi kulokhu, uthole umsebenzi eDubai. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngabe ufuna ukuthola umsebenzi e-UAE. Sebenzisa izinsiza zethu futhi uthole umsebenzi ngokushesha sicela sebenzisa isigaba sethu sokuLayisha kabusha. Ngasohlangothini oluhle uma ufuna umsebenzi wokuphatha. Sihlinzeka imisebenzi enhle yokufuna imisebenzi e-UAE. Kufanele ulayishe i-curriculum vitae kummeleli wethu e-Dubai City Company.
Kungani IDubai yindawo engcono kakhulu yomsebenzi nezikhathi ezintsha?. Ngoba abantu abalawula ukuqashwa e-UAE.
Layisha kabusha i-Resume Imisebenzi e-Dubai
IDubai City Company isiza abafuna umsebenzi hhayi e-UAE kuphela. Sisiza futhi nokuthola umsebenzi eQatar, Saudi Arabia naseGibhithe. Ngokwesinye isandla, singesinye seziza ezinhle kakhulu zomsebenzi eMiddle East. Unalokhu engqondweni, ofuna umsebenzi angalayisha ukubuyela ku-Dubai City Company. Inhlangano yethu ukuphatha uhlelo lokusebenza lwemisebenzi ngaphakathi kwekhaya. Wonke umuntu ofuna umsebenzi angathumela i-Curriculum Vitae. Ikakhulukazi kuya izikhungo zokuqasha amaNdiya. Futhi izinkampani zethu zenkampani yokuthola imisebenzi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Ngokuqinisekile uzokusebenzela kahle.
Ngaphezulu kwalokho wonke umuntu ofuna umsebenzi evela e-India nasePakistan ekuhambiseni kabusha i-Resume. Kuzoba nezinketho ezimbalwa ongakhetha kuzo. Abathunyelwe emakethe emisebenzi yomhlaba jikelele bangahambisa ikharikhyulamu yabo yezifundo. Indlela enhle ukulayisha i-CV kwizisebenzi zokuqasha nezinkampani zakwa-HR. Indlela smart futhi ukuthola inketho yokulayisha i-premium futhi uthole umsebenzi e-UAE. Futhi ngawe, njengomzingeli we-career kanye ne-expat kuyindlela enhle kakhulu yocwaningo olusha lwendlela yokuphila.
Ngaphansi kwalezo zimo, ubufakazi enikezwe yi-Dubai City Company. Wonke umqashi womsebenzi uyakwazi ukuthola umsebenzi okhokhelwa kahle e-Abu Dhabi. Ngenxa yalesi sizathu, abafuna umsebenzi jikelele bayakwazi ukuthola umsebenzi ngokusebenzisa i-Dubai City Company.
Kungani iDubai iyindawo enhle kunazo zonke ngomsebenzi nomsebenzi wakho?. Abaphathi abaphatha ukuqashwa kwezinkokhelo eziphezulu e-UAE.
Abafuna umsebenzi waseNdiya nabasePakistan
Inhlangano yethu esiza abafuna umsebenzi ikakhulukazi evela eNdiya nasePakistan. Wonke umuntu omusha obhalisa isicelo sakhe somsebenzi. Ngokuqinisekile, thola a Ithuluzi lokusesha umsebenzi. Ngakho-ke, ngalokho, bazokwazi ukuxhumana nezinhlaka zokuqashwa, izinhloko, abaqondisi bezokuphatha eDubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, naseGibhithe. Futhi ubheke umhlahlandlela wokusebenza kabusha e-United Arab Emirates.
I-Duba City City Inkampani iyisakhiwo esihle kakhulu sokuqasha e-United Arab Emirates. Ukuze sikubeke ngenye indlela, siyikho ukusiza wonke umzingeli we-expat nomsebenzi ngokuwabeka e-UAE. Ukuqaphela abantu bamazwe ngamazwe abangathanda ukukwenza beza emsebenzini webhange. Kungani i-Dubai iyindawo engcono kakhulu yokusebenza njengamaNdiya nasePakistan ?. Abantu bathola i-visa emisebenzini e-UAE. Ngendlela eqondile kakhulu.
Ngokolunye uhlangothi, uyozizwa ulondolozwa eDubai. Amaphoyisa ayamangaza eDubai nase-Abu Dhabi.
Ngakho-ke uma ufuna umsebenzi e-Dubai?
I-Dubai iyindawo engcono kakhulu yokusebenza njenge-expat ?. Abafuna umsebenzi bafuna umsebenzi ku-UAE.
Manje usunakho konke ulwazi ngokuphila e-UAE. Kufanele nakanjani uzame okwethu imisebenzi yokusesha imisebenzi yehhotela. Inkampani yethu e-Dubai iyinhlangano enhle kakhulu neqotho. Siza ukuthola umsebenzi e-Dubai inkampani futhi sithole umsebenzi ngokushesha ngaphakathi kwe-United Arab Emirates.
Lokho kusho ukuthi, singomunye umhlinzeki ngemininingwane engcono kakhulu yokuphila eDubai e2019 futhi ngethemba inkampani ehamba phambili ngokuzayo i-2020. Iqembu lethu licwaninga ngezindaba zomsebenzi wakamuva futhi liyithumela ku-Blog yethu eDubai. Elinye iphuzu eliyisihluthulelo uma ufuna umsebenzi futhi ufuna ukukhipha layisha kabusha izinkampani eziphezulu ngubani ohlala eDaily City.
I-Dubai City Company yinkampani engcono kakhulu yabaphathi abafuna ukusesha. Ngakho uma unolwazi ebhizinisini njengoC-Level singakwazi ukukunikeza amathuba omsebenzi omangalisayo e-Dubai. Indawo yethu yomsebenzi iqhuba umsebenzi wokufuna abaphathi abaphezulu ngaphakathi nangaphandle kwe-Dubai kubaphathi abaphezulu.
Wonke umuntu ofuna umsebenzi kufanele cabanga ngeDaily City ukuthola umsebenzi omusha. Emirates yiyona indawo engcono kakhulu kwabathuthukisi bemisebenzi ye-IT ne-Google. Dubai iyindawo engcono kakhulu yomsebenzi Layisha i-CV yakho enkampanini yethu.
I-Dubai yindawo engcono kakhulu yokusebenza njenge-expat
Thola umsebenzi e-Dubai City!
Ukuqashwa kwamakhasimende e-UAE
Thola Imininingwane eminingi mayelana neDubai? ngokumangazayo ungathola lokho. Vele uqale a new umsebenzi phakathi Dubai!